Iphupha malunga nefizikiki Discover ➡ Discover online ▷ ➡️
Iphupha malunga nefiziksi. Zininzi iithiyori malunga nokuba kutheni siphupha, kodwa akukho nanye eyamkelweyo ngokupheleleyo. Emva koko, uya kufumanisa intsingiselo yamaphupha.
Kutheni le nto iapile liwela emthini lize liyeke emhlabeni? Ngale ndlela okanye ngendlela efanayo sonke sihlangana nefizikiki esikolweni. Ootitshala beFiziksi bayathanda ukubonisa abafundi babo ukuba zisebenza njani iipelesi.
IFizikiki yisayensi yendalo ejongana neziganeko njengoko zisenzeka kwindalo, umzekelo ngamandla omxhuzulane okanye amandla, kodwa kunye nolunye unxibelelwano kwisithuba kunye nexesha.
Umba kunye namandla zikwangumbandela wophando. Ngelixa uninzi lwabantu lusahamba kunye neziseko, i-physics ephezulu okanye i-quantum physics yincwadi, njengemathematics ephezulu. Njengoninzi lwezesayensi, i-physics ihlala ithathwa njengomsebenzi weziyobisi okanye abantu abangaphandle kwehlabathi. Nangona izinto azichazayo nezichazayo zisenzeka rhoqo kuzo zonke iindawo zobomi bethu, kunqabile ukuba sijongane nefizikiki kubomi bemihla ngemihla.
Kuthetha ukuthini xa siphupha ngayo? Inabuphi ubume ekuchazeni amaphupha?
1 Uphawu lwephupha «IFizikiki» - Ukutolikwa ngokubanzi.
2 Uphawu lwephupha «Ngokwasemzimbeni» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «Ngokwasemzimbeni» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «IFizikiki» - Ukutolikwa ngokubanzi.
IFizikiki njengophawu lwephupha lunokwalatha kumacala ahluke kakhulu. Ukutolikwa kwamaphupha kuhlala kuxhomekeke kukuthanda kunye nokungathandwa komphuphi kunye neemeko zakhe zokuphila. Ukuba uqinisekile nge-physics, iphupha elinolu phawu linokubonisa mpu melelo. Izicwangciso zakho ziya kuphumelela, unokumelana nomcimbi onzima.
Isimboli yephupha nayo inokumela imiba yobungcali, iphupha ngoku lijolise ngakumbi kwizinto eziphathekayo nakwicala lekhonkrithi lobomi bakho.
Kwelinye icala, ukuba iphupha liyathandabuza ukujongana nefizikiki kwaye lidibana nefiziksi ephupheni, oku kuhlala kumela umntu onolwazi oluninzi lobuchwephesha, kodwa uyadika kwaye ubonakalise kumntu ophuphayo. ukongama phambi kwakhe. Nokuba iphupha apho i-physics idlala khona isigqibo sinokukhokelela kuninzi amabhongo.
Kukho ukukhanya, kukho nesithunzi, kwaye abo bagxila kakhulu kwizinto eziphathekayo bayazilibala iimvakalelo zabo. Ke, uphawu "ifiziksi" lunokuqondwa njengesilumkiso sokuba umphuphi uyayisusa iimvakalelo kwaye ndazama ukubona yonke into kumgangatho oyinyani kunye nengqiqo.
Uphawu lwephupha «Ngokwasemzimbeni» - ukutolikwa kwengqondo
Kwingcaciso yengqondo yamaphupha, iphupha le-physics okanye i-physicist uphawu lwesilumkiso kumntu ophuphayo. Umphuphi akazinanzi iimvakalelo zakhe okanye uzibeke ecaleni. Kunokubakho ukungqubana nabantu obathandayo kuba okwangoku ungabakhathaleli. Mhlawumbi uxinezelekile kwaye uzama ukufikelela kwiingxaki zakho kwinqanaba elisengqiqweni.
Uphawu lwephupha lubonisa umntu ophuphayo, ohlala phantsi kweemeko ezithile, ngoku okhokelela kubomi "obunentsingiselo" ngaphandle kothando.
Uphawu lwephupha «Ngokwasemzimbeni» - ukutolika kokomoya
Ukuphupha malunga nefiziksi kuthetha ukuba ulahlekelwe kukunxibelelana nobumoya bakho. Endaweni yoko, zama ukunika yonke into isizathu esinokuchazwa ngokufanelekileyo.